रसियाको शीर्ष सबै रिसोर्टहरूको स्पापरुर्डहरू
शीर्ष-: रसियामा सब भन्दा राम्रो स्मा होटलहरू
मेरो होस्ट (ekereinburg)
खुशी (सेन्ट पीटर्सबर्ग)
mahas स्मा (मस्को)
Rixos रोयल स्मा (Sochi)
म्यान्डर स्मा (मस्को)
छुट्टीको आगमनको साथ, हामी सबै कहाँ जाने भनेर सोच्दछौं। स्पा होटेलले हामीलाई आराम गर्न मात्र मद्दत गर्दछ, तर स्वास्थ्यमा पनि निम्त्याउँछ। रसियामा यात्रा गरेर हामी कस्तो भरोसा राख्छौं, र के स्पा होटलहरू आजका लागि उत्तम हुन्।
निदान र वजन घटाउने र तौल घटाउने हार्डवेयर कस्मेजराप, हार्वोत्तर, मन्त्रिपरिषकहरू सहित विभिन्न कार्यक्रमहरू सहितको धेरै स्पा प्रक्रियाहरू परीक्षण गरेर Biopecolly, प्रत्यक्षदर विस्तार, भौं सुधार र धेरै प्रकारका श्रृंगार। होटेलमा एक सय प्रतिशत आनन्दको लागि, तपाईं नेल हेरचाह सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, साथै स्टाइलिस्ट हेयररेडरहरूको भ्रमण गर्नुहोस्।
जब तपाइँ निश्चित रूपमा, उच्च-गुणवत्ता आराम, उत्कृष्ट रमाइलो कार्य र पुनर्स्थापना प्रक्रियाहरू, युरोपमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ, मानेरिचित होटेलमा पनि रोकिन्छ।
Verb Mayr ले पाँच-स्टार होटल र एक व्यक्तिगत दृष्टिकोणको साथ कल्याण मेडिकल केन्द्रको संयोजन गर्दछ। यो रसियामा यो एक मात्र स्थान हो जुन आधुनिक एकीविक औषधिको युरोपियन मापदण्डहरूमा काम गर्दछ। मेमा दृष्टिकोणको आधारमा - मेयरमा थेरापी। यसले तनाव, अधिक तौल, अनिद्रा, एलर्जी, उर्जा घाटा, उर्जा घाटा र अन्य नतिजाहरूको छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ।
सेवाहरू: उच्च भान्छा र स्वस्थ पोषणको रेस्टुरा, विशेषज्ञहरूको परामर्श, ट्रान्सलजी र कपाल हेरचाह, सौन्दर्य र Insement
<< p> होटल ISTRE RESEVEVOIR को किनारमा अवस्थित छ र यसको आफ्नै बीचको छ। M''ishra'l होटल र SRA मा, सक्रिय मनोरन्जन र प्रभावकारी चिकित्सीय प्रक्रियाहरू संयोजन गर्न सुविधाजनक छ। कल्याण क्लिनिक "ला स्रोत RATE RATES" यसको इलाकामा काम गर्दछ, जहाँ केही दिनहरूमा तपाईसँग सुरक्षा, तनाव र शरीरको शुद्धिकरणको लागि निदान र कार्यक्रमको तुलनामा।
सेवाहरू: उच्च नेशनल किचेन रेस्टुरेन्टहरू, लबी बार, स्पान-परिसर, माछा मार्ने काम, समुद्री किनार, भाग, टेनिस, भलिबल, पेन्टबल, tir, बच्चाहरूको शहर
के तपाइँ डिजाइन स्पामा पूर्व नयाँ वर्ष ग्वासबाट ब्रेक लिन चाहानुहुन्छ? यसो गर्न, टाढा देशहरूको लागि जानु आवश्यक छैन! पहिले, रसियाको सर्वश्रेष्ठ स्पा केन्द्रहरूको सूची जाँच गर्नुहोस्
<< ploke होटल स्पा हन्टेट रेगन्स 20 औं तलामा अवस्थित छ र शहरको भव्य दृश्य छ। केन्द्रको बलियो पक्ष चिनियाँ औषधि र अन्य विदेशी अभ्यासहरूको परम्परागत तरीकाले आधारित प्रक्रियाहरू हुन्। पश्चिमी टेक्निकहरू प्रयोग गरिन्छ: युरोप र एशियाको सिमानामा उभिएको सहरको लागि प्रासंगिक संयोजन।
एसएटीएस पेसर्सबर्ग होस्टबर्ग होटेलको भित्री भागका लागि डब्ल्यूआईएन्टरसलाई एन्टोनियो चिनोओओ र प्याट्रिसिया वाएल। अमेरिकी हेरिज नेटवर्कको सबै ओसेकमा, प्रक्रियाहरू पनि पुजारीको रूपमा समावेश गर्दैनन्, तर मनोरञ्जनका लागि: क्यान्सर-एन-ब्लूजहरू ध्वनिहरू हुन्छन्।
Aramice महतामा अनुवाद गरिएको "सन्तुलन" भनेको हो। ब्रिटिश ब्यूरो रेस द्वारा डिजाइन गरिएको आर्निएको आन्तरिक नामसँग मेल खान्छ: यो सौन्दर्य सौदारको उज्यालो र उज्यालो क्षेत्र बीचको मन्त्रिपरिषक क्षेत्रमा डुबेको छ, अँध्यारो काठका साथ। हम्मम द्वारा मोसाइक-राखे।
rixos होटल र्याक्सस होटेल कारास्टा पोर्शेना, होस्टहरू ओडिक्स र मार्बलमा प्रशंसा गरेनन्: 90 600 को उचाईबाट खोजिएको छ। मिटर हम्मा र फिनिन सौना स्की ढलानमा एक दिन पछि बल भण्डार गर्न मद्दत गर्दछ।
लेट स्पा केन्द्रको मौलिकतामा - मस्कोको शर्त चर्कोमा। क्याबिनेटहरू मिसनहरू मिल्दोजुल्दो क्यावहरू मिल्दछन्, स्पा एन्डरले ज्वालामुखी ढु stone ्गाबाट, पर्खालमा - लोटस सिल्हूटहरू। विल्सनबाट डिस्टेन्स र सहयोगीहरू ब्यूरो ब्यूरोले फे gh shui कानून देखे: कोरियाली होटल नेटवर्कमा तिनीहरू धेरै सम्मानित छन्।
रसिया स्कसा रिसोर्टहरूले आवश्यक उपचार र रिकभरीलाई फोहोरको साथ नजिकै उपस्थित प्रायोजक वा खनिजका स्रोतहरू प्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ जुन फोहोरको साथसाथै। सामान्यतया स्पा केन्द्रहरू अवस्थित रिसोर्ट-आधारित थर्मल वा माटोको स्रोतमा सिर्जना गरिन्छ।
SPA रिसोर्टहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा छन्, त्यसैले तपाईं तिनीहरूसँग चाँडो र रूसको कुनै पनि भागमा पुग्न सक्नुहुनेछ। अधिकांश कालो समुद्री तटमा अवस्थित छन्, जुन अपराध, साथै काकेशियन खनिज पानीको क्षेत्रमा पनि छन्। तर, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं ट्रान्सबालिक्सिया र बाखेलको रिसोर्टहरूमा पुग्न सक्नुहुनेछ। स्पा रिसोर्टहरू दुवै अल्टाई र Bashkiria मा छन्। रिसोर्टको छनौटको मुख्य रूपमा मुख्यतया उपचार आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ, उदाहरणका लागि, बेलोचुरिचमा छाला सहित प्रतिरोध र सूजन बढाउने ड्राइभ गर्दैछ।
धेरै रिसोर्टहरू काकेसियन खनिज पानीको क्षेत्रमा अवस्थित छन्, जसले एक साथ स्वास्थ्य र फोहर उपचारको लागि सम्भव बनाउँदछ। 1 shae क्षेत्रहरू एक बर्षमा उपस्थित हुन सकिन्छ, किनकि त्यहाँ वर्षको कुनै पनि समयमा प्रयोगको लागि विशेष पूर्वाधार छ। यद्यपि पर्यटकहरूको मुख्य प्रवाह गर्मी र शरद in तुमा यी रिसोर्टहरूमा आउँछ।